Dhairekitori, Bhizinesi Webhusaiti Dhizaini & SEO - Bhizinesi Dhairekitori
Rondedzero yedu inokupa iwe nemabhizinesi mazhinji aungangoda rubatsiro rwawo. Isu tinopawo webhu masevhisi: Izvi zvinosanganisira webhusaiti dhizaini masevhisi, pane peji rekugadzirisa masevhisi, SEO masevhisi, tsika software kuvandudza, zvichingodaro. Unogona kuwana nyanzvi dzekubvunza kuti ugadzire maakaunzi evashandisi, mhanyisa nhepfenyuro dzeSocial Media kushambadzira uye nezvimwe zvese. Iwe unogona kuhaya SEO masevhisi ayo achakubatsira iwe kuisa yako webhusaiti pamusoro peakanyanya mainjini ekutsvaga seGoogle, Bing, Yahoo uye mamwe akafanana enjini dzekutsvaga. Varairidzi vedu vanogona kukubatsira iwe kuenzanisa akawanda akakodzera mazwi akakosha uye kubatsira vanhu kuti vawane yako webhusaiti
MaInjini ekutsvaga akaita kuti zvive nyore kwazvo kutsvaga zvinhu zvakanaka, kana iwe uchinge watsvaga iwe unokwanisa kuwana mamirioni ezviwanikwa pane ese makuru injini dzekutsvaga dzakadai seGoogle, Yahoo neBing, nezvimwewo Zvinobatsira kuwana bhizinesi, sevhisi kana chigadzirwa icho vanhu vangangoda kutenga.
Nzvimbo yedu inobvumira mabhizinesi kana varidzi vewebhusaiti kuti vawedzere webhusaiti yavo kudhairekitori redu. Kana bhizinesi rikawedzerwa kune dhairekitori, rinoshandawo semashure backlinks kune hombe webhusaiti uye zvakare rinowedzera masimba echiremera. Uchishandisa chaiyo SEO masevhisi anovimbisa kuti iwe unokwanisa kukwira kupfuura wako mukwikwidzi maererano neinjini yekutsvaga mhedzisiro.
Kune akatiwandei SEO zvikonzero izvo mawebhusaiti anofanirwa kutevedzera kuona kuti ivo vanokwanisa kukwira kumusoro pane yekutsvaga injini. Iyo inowedzera huwandu hwezvinhu webhusaiti iri kukwanisa kukwidziridzira mawebhusaiti ayo, zvakanyanya iyo inokwanisa kukwira kupfuura vakwikwidzi vayo. Uchishandisa SEO masevhisi, zvakakosha kuti iwe uve neruzivo rwakakwana nezvazvo. Yedu rondedzero inokupa iwe SEO nyanzvi dzinogona kukubatsira iwe neSEO kubvunzana uye SEO masevhisi ayo anobatsira webhusaiti yako kukwirisa kumusoro pane yekutsvaga injini mhedzisiro Kunyangwe iwe uri kuronga kutanga webhusaiti kana uine webhusaiti asi uchida kugadziriswa, kuhaya nyanzvi kubva kudhairekitori rondedzero ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo.
Bhizinesi Webhusaiti Dhizaini
Tsvaga zvimwe nezve webhusaiti Seo
SEO (Tsvaga Injini Optimization) maitiro ndiyo nzira yekuvhara zvimwe zvinhu uye zvirinani pane anokwikwidza masosi.
Desktop, Laptop & Maoko Anochengetwa
Makomputa emazuva ano nemagadget zvinoramba zvichimatsurudza zuva rega rega, makomputa anowanikwa mumasikisi akasiyana, aine akasiyana software uye Hardware, mamwe maficha, nezvimwe.Kuvandudzwa nenguva kwakakosha kana iwe uchida kushandisa zvese zvivakwa uye maficha anopiwa nehunyanzvi
Tichifunga nezvekugadziriswa kwemidziyo yakasiyana, zvakakosha kuti webhusaiti inofanirwa kuzvigadzirisa pachayo kuti ikwane zvese zvishandiso uye isanyanya kuve kune imwe mhando. Ichi chikamu chakakosha chekodhi yewebhusaiti, uko chinoita kuti webhusaiti ienderane nemidziyo yese, iite kuti ikurumidze uye ipindure uye chengetedza kukodha kwakachena.
Makomputa masevhisi zvakare anosanganisira ekugadzirisa masevhisi, kugadzirisa, kugadzirisa uye kusimudzira izvo zvichave nechokwadi chekuti komputa inoramba ichishanda zvakaringana. Dhairekitori redu rinokupa iwe nyanzvi dzinogona kukubatsira iwe nemhinduro dzekugadzirisa komputa, nyaya, kusimudzira, kubvunza kuti uwedzere kumhanya kwemakomputa uye kuzadzikisa zvimwe zvinodiwa.
Zvimwe Nezve Makomputa
Dzakabatwa nemaoko & Madiki Midziyo
Makomputa ekugadzirisa masevhisi anodikanwa paunotanga kuona matambudziko mukombuta yako nekuda kwenyaya dziri mu Hardware kana software.
Kuwedzera kana kukwidziridza madhiraivhi akaomarara, RAM, kadhi yemifananidzo, nezvimwewo kana kukwidziridzwa kwesoftware senge windows, mafaera enhau, nezvimwe zvakakosha nekuti zvinobatsira kuramba uchimhanyisa komputa zvakakwana.
Komputa mudziyo wemagetsi uye wakafanana nechero mudziyo, naiwo unoda kugara uchigadziriswa. Izvi zvinoreva kuchenesa Hardware nesoftware kuti iwedzere kumhanya kwekombuta, kusimudzira pazvinenge zvichikosha, nezvimwe.
Computer Kugadzirisa Kubvunza
Unogona kufunga kubvisa dambudziko rako wega, asi zvinokurudzirwa kuhaya nyanzvi dzinogona kukupa ruzivo rwakakosha uye masevhisi kuti ubvise dambudziko iri.
Bhizinesi kana Service Directory Chinyorwa
Dhairekitori redu rinonyora runyorwa rwevanyanzvi uye nyanzvi dzinogona kukupa mhinduro dzematambudziko ako, dzinogona kubatsira mukumhanyisa bhizinesi rako zvinobudirira uye kupa kubvunza.
Mune webhusaiti, mifananidzo, mavhidhiyo uye zvemukati ndizvo zvinhu zvinoonekwa pawebhusaiti. Kunze kweizvi, zvimwe zvinhu zvaunowana pawebhusaiti zvinogadzirwa uchishandisa mutauro wekutanga wekunyora. Iwe une sarudzo yekutarisa mapuratifomu eCMS kana vavaki vewebhusaiti izvo zvinogona kukubatsira iwe kugadzira kana kugadzira webhusaiti zviri nyore. Nekudaro, aya matemplate magadzirirwo zvakare akagadzirwa uchishandisa yakakosha kodhi mutauro uye unogona zvakare kugadzirisa matemplate zvinoenderana nezvaunoda. Iko kusanganiswa kwemitauro yekodhi yakashandiswa hakufanirwe kukonzera chero kukanganisa kana kudzikisira peji rekumhanyisa kumhanya, inofanirwa kuve kunetsekana.
Kune maviri marudzi emawebhusaiti ayo anogona kugadzirwa
Static Saiti - Aya anowanzo ari ega peji peji webhusaiti ine yakamira kana yakagadziriswa zvemukati. Zvinyorwa zviri pawebhusaiti zvinongochinja kana zvashandurwa nemaoko.
Dynamic Saiti - Aya ndiwo mawebhusaiti anotungamirwa nedhatabhesi, ayo anovandudzwa otomatiki kana zvemukati kana peji zvikawedzerwa kune webhusaiti. Iyo webhusaiti inoonekwa seinonyanya kushandisa mushandirapamwe uye yakawanda yekutsvaga injini inoshamwaridzika.
Zvimwe Nezve Webhusaiti
Coding Optimization YeSEO
Iwe unoda kubvunzurudzwa here?
Kuziva zvakajeka kuti ndeipi nzira uye mikana inogona kubatsira kuchengetedza mari uye nguva nesarudzo chaiyo.
Tsvaga Engines Optimization
SEO inoreva kutsvaga kweinjini yekutsvaga; ndechimwe chezvikamu zvakakosha zvekuisa webhusaiti pane injini dzekutsvaga. Pane matanho akati wandei anogona kutorwa kuita webhusaiti SEO kushamwaridzana; izvi zvinotanga kubva mukutenga duraini, kutora dura rekutambira tsvaga maficha uye zvivakwa zvainopa uye gadzira webhusaiti ine yakachena uye inoshanda kukodha.
Kuti uve nekodhi yakachena uye inoshanda, iwe unogona kunge uine ruzivo nezve kukodha kana kutsvaga nyanzvi yekunyora kuti ugadzire kurodha webhusaiti iri yekutsvaga injini inoshamwaridzika uye inofambidzana nevashandisi zvakare. SEO yakakosha nekuti inoita kuti webhusaiti ive inoenderana uye inoitendera kuti iwane zvirinani mitsva yekutsvaga.
Kune maviri marudzi eSEO -
Izvi zvinosanganisira kugadzirisa mafaera, zvemukati uye midhiya pawebhusaiti yako, inosanganisira peji rekugadzirisa, kuwedzera zvirimo uye ma tag, nezvimwe.
Link Kuvaka, backlinks kuendesa, dhairekitori runyorwa kuendesa, uye zvichingodaro chikamu cheIkunze SEO. Inobatsira webhusaiti kuvaka chiremera uye chinzvimbo chepamusoro pane injini dzekutsvaga.
Zvimwe Nezve SEO
Yakagadziriswa Kodhi & Zvakakodzera Matagi
Yemunharaunda Zvinyorwa, Vashanyi, Backlinks
Unoda SEO Kubvunza?
Kujekesa ruzivo nezve SEO (Tsvaga Engines Optimization) inobatsira kutanga kubva munzira kwayo.
Yekutsvaga Injini Kuzviisa
Tsvaga Engines uye Dhairekitori Kutumira
Kuti webhusaiti ive chikamu cheWorld Wide Web uye ionekwe pamhedzisiro yekutsvaga zvakakosha kuendesa iyo URL pane Yekutsvaga Injini uye maRondedzero zvinyorwa. Injini yekutsvaga uye madhairekitori anoshandiswa zvakare kune saiti feed kutumira zvakare. Dhairekitori kuendesa uye yekutsvaga injini kuendesa kunoonekwa seimwe yeakanakisa maitiro ekuvaka dura chiremera uye kuita kuti webhusaiti yako ifarirwe.
Sezvo iwe paunogadzira webhusaiti nyowani zvinova zvakakosha kuendesa yako saiti kune enjini dzekutsvaga. Kune injini dzekutsvaga dzinoda kuendesa nguva dzose kune peji nyowani rewebhu raunowedzera kune webhusaiti yako, nepo kune mamwe mawebhusaiti anongoda iwe kuti utumire yako webhusaiti URL uye ivo vanokambaira kuburikidza nemapeji kuti vazviise otomatiki. Kuendesa dhairekitori kunoreva kuendesa webhusaiti yako kumadhairekitori akasiyana zvichienderana nezvikamu nezvikamu zvidiki.
Paunenge uine bhizinesi, iwe unogadzira webhusaiti uchishandisa basic coding mutauro; iwe chengeta iyo yekuwedzera chikamu mupfungwa uye zadzisa webhusaiti. Chinhu chinotevera chekutarisa pane chinzvimbo chepamusoro pane yekutsvaga injini mhedzisiro. Link chivakwa uye backlinks kuendesa ndiyo yekunze SEO maitiro iwe aunofanira kutarisa pairi kuti uve nechokwadi chekuti iwe une yepamusoro domain chiremera kusvika chinzvimbo chepamusoro kupfuura wako mukwikwidzi.
Iwe unogona kunakirwa nerubatsiro rwekuendesa yako webhusaiti kana bhizinesi pane dhairekitori redu mune akakodzera zvikamu uye zvidiki zvikamu, uko vangangove vatengi vanogona kuwana yako webhusaiti kana bhizinesi zviri nyore.
Zvizhinji Nezve Kutumira
Tsvaga Engines & Madhairekitori
Dyisa Engines & Zvidimbu Zvekupa
Hwebsite Kuendesa Kunotsvaga Injini
Unoda isu kuti titumire webhusaiti kamwe chete kana munguva yenguva yekutsvaga injini uye madhairekitori epamhepo?
Bhizinesi Webhusaiti Dhairekitori Rondedzero
Tumira webhusaiti zvinyorwa mune chinodiwa chikamu uye chikamu chikamu neruzivo, logo uye mifananidzo
Hwebsite Kuzviisa Kune Yedu Dhairekitori
Unoda kuendesa webhusaiti kune dhairekitori remahara?